नेपालमा सवारी भित्र्एिको ईतिहास र ट्रक भित्र्याउने सरदार, काठमाडौ उपत्यकाको अनिकाल टार्ने व्यक्ति - Raja Times - News from Nepal
२०७८, २७ भाद्र आईतवार १४:५९
रक्सौल हुँदै अमलेखगञ्जसम्म ट्रेनमा आइपुगेका प्रितमलाई काठमाडौँ आउन थप तीन दिन लाग्यो । ‘बाटोमा ओर्लिएर पिसाब गरेर फेरि चढ्न पनि भ्याइन्थ्यो, त्यस्तो थियो रेलको गति,’ प्रितमले सम्झिए, ‘अमलेखगन्जमा जङ्गलै जङ्गल मात्र थियो । पुरानो जीएमसी गाडीलाई पनि काठमाडौँसम्म आउन हम्मे थियो ।’
तर, प्रितमलाई काठमाडौँ कुनै आधुनिक सहरजस्तो लागेन । न त बेहुलीका बाले भनेजस्तो तुल्सीपुरबाट नजिक नै थियो । ‘अहिलेको विमानस्थललाई त्यतिबेला गौचर भनिन्थ्यो, त्यहाँबाट पटनासम्म डाकोटा अर्थात् सानो प्लेन चल्थ्यो । अत्यास बढेपछि त्यसैमा चढेर म भोलिपल्ट बिहानै पटना फर्किएँ ।’
त्यसपछि भारतीय सेना आफ्नो उपस्थित देखाउन काश्मीर छि–यो । ‘उनीहरू प्लेनमार्फत प्यारासुटबाट झर्दै थिए, झन्डै ६ फिट अग्ला सरदारहरू थिए । तर, पठानहरूले जमिनबाट हवाई फायर गर्दै झन्डै २५ प्रतिशत सेनालाई आकाशमै मारे,’ घटनालाई प्रत्यक्ष नियालेका प्रितम सिंह भन्छन्, ‘जो जमिनमा उत्रिए, उनीहरू खरो देखिए । उनीहरूले पठानहरूलाई अन्ततः परास्त गर्न थाले ।’
प्रितमको बाँकी परिवार पनि जम्मुमा स–यो । उनी जन्मिएको पुन्च जिल्लास्थित गाउँ अहिले पाकिस्तानमा पर्छ । युद्धले धार्मिक सद्भाव बिथोलिएपछि यहाँको शिख र हिन्दु जनसङ्ख्या अन्यत्रै सर्न बाध्य बन्यो ।
सकस यतिमै सकिनेवाला थिएन । बयलगाडा चल्ने साँघुरा बाटामा सडकमा ट्रक गुडाउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । मिर्जारपुरबाट अगाडि बढेपछि ससना पोखरीहरू थिए । त्यहाँबाट ट्रक अघि बढाउनसक्ने अवस्था नै रहेन । प्रितमको युवा जोशले फेरि अर्को बुद्धि फुरायो– रेलको लिक हुँदै गाडी लैजाने ।
प्रितम र ड्राइभर दुवैजना एकाएक आत्तिए । ड्राइभरसँग टायर खोल्न प्रयोग गरिने रड थियो, त्यसैले अगाडिको सिसा फुटाएर उनीहरू बल्लतल्ल बाहिर निस्किए । ट्रकको पछाडिपट्टि बसेका सहचालक पनि गाडीमुनिबाट छिरेर उनीहरूलाई भेट्न अगाडि आएका रहेछन् । ‘ब्याट्रीको तार लुज भएकाले गाडी रोकिएको रहेछ । हामीले तार कसेर फेरि गाडी स्टार्ट ग¥यौँ,’ प्रितमले भने ।
गाडी हिँड्ने बाटो कतै भिरालो थियो, त कतै खाल्डाखुल्डी । उनीहरूलाई काठमाडौँ आइपुग्न थप दुई दिन लाग्योे । ‘मोड धेरै छोटा थिए । हरेक मोडमा खलासीलाई उठाउनुपर्ने, आफैँ ढुङ्गा राख्ने, त्यसलाई मिलाउने र आउने ग¥यौँ,’ उनले भने ।
त्यस ट्रकलाई उनले सीधै न्युरोडको मध्य भागमा ल्याएर राखे । स्थानीयहरू मालवाहक ट्रक आइपुगेको देखेर छक्क थिए । तर रात परेपछि केही हुल्याहाहरू आएर गाडी तोडफोड गर्न पनि खोजे । ‘पञ्जावीले किन गाडी ल्याएको ? यसको के काम ?’ प्रितमले सम्झिए, ‘उनीहरू सायद यस्तै भन्दै थिए । उनीहरूले पिएका थिए । उनीहरूले गाडी बिगार्न खोजेपछि हाम्रा चालक र सहचालकहरू पनि बचाउनका लागि अघि सरे ।’
विष्णुमणिले सोधे ः कसरी ल्याउन सकिन्छ ?
प्रितमको जवाफ थियो ः मलाई १ सयवटा गाडी चाहिन्छ । ती गाडी ल्याउनका लागि सरकारले कर छुट दिनुपर्छ । ड्राइभरहरू मैले भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । भारतीयलाई लाइन्सेन्स दिने व्यवस्था पनि तपाईंहरूले नै मिलाउनुपर्छ ।
प्रितमको हस्ताक्षर भएको एउटा कागज पनि तयार गरियो; जो त्यतिबेलाको लाइसेन्स थियो । ‘मेरो हस्ताक्षर भए
का ती कागज देखाउनेलाई गाडी ल्याउन कुनै रोकतोक हुँदैन थियो,’ प्रितमले सम्झिए ।
४ वर्षमै नागरिकता
उनलाई काठमाडौँ नै प्यारो लाग्छ । ‘कुनै समय थियो, जतिबेला हामी सरदारहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँहरूलाई पनि काश्मीरी नाम दिने गरेका थियौँ । जस्तो वीरगन्जलाई जम्मु, काठमाडौँलाई श्रीनगर भन्थ्यौँ,’ हाँस्दै उनले भने, ‘म जन्मिएको पुन्च र यहाँको हावापानी उस्तै छ । त्यसैले मेरो दोस्रो घर यही हो ।’